Biladda Hormuudyada Xadgudubka 2012 | KEYDMEDIA ONLINE
Biladda Hormuudyada Xadgudubka 2012
Keydmedia Online - Dunida Sanad walba waxaa laga bixiyaa abaalmarino kale duwan, kuwaasoo qiimeyntooda lagu salgooyo dhinaca Horumarka iyo Wanaaga, waxaadna maqashay Sanadkan abaalmarinta Nabadda, Maamul Wanaagsa, qorida Buug xigmad ku dheehantahay, uheelanaanta badbaadinta Buldhada iyo u Dagaalanka Xuquuqda Bini'aadamka.
Keydmedia Online waxay baaritaan xoog leh ku sameesay in ay idiin soo naqshadeeso hadaad Soomaali tihiin Shakhsiyaadkii idinka galay dambi Qaran, mid Ummadeed, mid Dhaqan iyo mid diimeedba ee Saannadka 2012. Sanadkaan 2012 waa markii Sadexaad oo ey Keydmedia Online bixineyso Biladda Shaqsiyaadka Caadeystay in ay ku Xadgudbaan Sharafta Bulshada Soomaaliyeed.
1. Faarax Macalin - Gaandi - Axmed Madoobe
Faarax Macalin waligiisba wuxuu Soomaalida ka dhex waday qas, waxaa lagu xasuustaa taageeraduu siinjiray Maxkamadaha oo huwanaa Al-Shabaab. Beelaha Soomaaliyeed oo soo doortay wuxuu ka doortay Beeshiisa. Wuxuu yiri:“Ma dhici doonto in mar dambe Xamar looga taliyo Kalbiwo, ninka taas ku riyonaya, waxa uu ku nool yahay qarni kale…”
Nin Magac Soomaali wata, dhiig Soomaalina ku jiro, sidee buu ugu hamminayaa in Gumaysiga loo sii ballaarsho Soomaaliya!? Fikriga Guracan ee Gumeystaha laga dhaxlay waa mid ay wada Wadaagaan Farax Macalin, Warlord Gaandi iyo Axmed Madoobe.
Horey baa loo sheegay in aysan wadin Maslaxad Bulsho ay ku diirsato waxey Dagaalka u soo qaadeen oo kaliya inay barakiciyaan Bulshoweynta koofurta Soomaaliyeed. Ciidamada Kenya, Gaandi iyo Axmed Madoobe waxay dileen oo dhaawaceen Dad aad u farabadan. Labadii Sano oo ay Dagaalka wadeen Dadka ay Dagaankoodu ka Barakiciyeen waxaa lagu qiyaasay 80.000. Faarax & Gaandi Falkaas ma ku diirsadeen?
Taariikhda Soomaaliya horey bey usoo martay kuwo Dabadhilif ah oo uu Gumeystuhu danihiisa ku fushado, diyaarad la saaro, labo habeen Hotel kadiifad Gaduudan la seexiyo, BBC-da laga sheego, xoogaa Dollar ah Jeebka loo galiyo kadibnah markii dantii laga lahaa laga gaaro la yiraahdo kuma naqaan oo ciida lagu jiido!
Kenya 1991 wixii ka dambeyay ayay Siyaadad ahaan iyo Dhaqaale ahaanba kobocday, mirahaas Kobocaas Dhaqaale iyo Siyaadsadeed waxaa dhalay Burburkii Soomaaliya, dhaqaalihii ay Dadka Soomaaliyeed soo galiyeen baa Dhaqaalahoodi kor u qaaday, waxeyna 5 Sano kadib Kenya isku badashay Caasimada Labaad ee Africa, waxey noqotay Meesha reer galbeedku ay Saldhiga ka dhigtaan oo guud ahaan Afrika laga burburiyo gaar ahaanah Soomaaliya.
Kenya waxey Soomaalida ugu amaalguday in ay Baad ka qaado, Kufsato, disho, xirto Dadka Soomaaliyeed, Labadii Biloodnah mar Dadka Soomaaliyeed la raafo kadibnah si loosoo daayo laga ganacsado oo mid mid loo gato.
Dowladaha Norway, Fransiiska, Talyaaniga ayaa Kenya waxey siiyeen Qandaraas Raqiis ah, waxey u tababareen Ciidamo looma ooyaan ah oo Calooshood u shaqeysataal ah kadibnah waxey ku qabsadeen Koofurta Soomaaliya ayadoo loola jeedo in halkaas laga soo saaro Shidaalka Soomaaliya ee halkaas Ceegaaga.
Ciidamadaas Kenyaanka iyo Calooshood u Shaqeysayaal Soomaaliyeed ayaa waxey Xasuuq ku hayaan Dadka Soomaaliyeed, Xusuuso Xasuuqi Mandheera, Xasuuso Xasuuqi Gaarisa iyo Xasuuqa iyo Barakicinta ay Booliiska Kenya ka wadaan Xaafada Eathligh ee Soomaalidu dagto. Faarax Macalin iyo Gaandi ma weydiiseen in ay Falkaas ku diirsadeen?
Xadgudubka ay Kenya ku fulineyso Dadka Soomaaliyeed waa mid Amnesty International ay idhaha ka daboolatay, Media-danah waxey galiyeen "Blackout" taasoo loo fasiran karo in Raali looga yahay.
Kenya waxey naga mudantahay Biladda Hormuudyada Xadgubdka 2012.
3. Maxamad Axmad Caalin
Waa gibban yar oo ku guuldarraystay hankii Madaxweynenimo oo loo qabey. Wuxuu ku dhaaranayaa inuu sii burburiyo wixii Bulshadu dhisatay. Qalalaase Bulsho ayuu hadda usoo tafaxaytay, wuxuuna raadinayaa inuu aano dhexdhigo Bulshadii Dhisatay. Waa la mood noqon waayey.
Reer Galmudug waxey ku eedeeyeen: Wuxuu leexsaday Hanti lacageed iyo Deeq farabadan oo qaar Raashin yahay oo danyarta lagu Quudin lahaa. Ma xishoodo, umana hoggaansamo xeerka deegaanka u dagsan, malana laha haybad hoggaamiye oo lagu daydo. Wuxuu la haasaawaa oo uu Caleynta (Qaad) la cunaa kuwa laga ashahaato oo aad u taqaaniin Burcad Badeedda.
Waa lagu hingoobay, waayo wuxuu kusoo baxay daneyste yarow ah oo muquunsada wuxuu gacanta la helo.
4. Safaaradaha Soomaaliyeed - Nuur Cadde / C/xakiim Cali Yaasiin
Safaarada Soomaaliya Siyaasadeeda dibada ugu Muhiimsan waa Mida Roma, Dalka Talyaniga iyo Brussel ee Dalka Belgium oo uu Safiir ka yahay Nuur Cade.
Nuur Cade Markii uu Shariif Sheikh Axmed Magacaabay oo uu Safaarada Soomaaliya la wareegay wuxuu Durbadiiba isku xeyndaabay Koox ay isku Heyb yihiin, Albaabkanah ka xirtay Soomaalida inteedi kale. Wuxuu Booliiis ugu yeeray oo u Banaanka dhigay Boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo Tahriiib ku yimid oo gabaad iyo Hooy ay u aheyd Dhismaha Safaarada Soomaaliyeed.
Wuxuu ku guuleystay inuu Gacanta Soomaaliya ka bixiyo Aqalkii Safaarada Soomaaliya ay ku laheyd Xaafada ugu Qurxda badan (Via Dei Vilini) ee Magaalada Rooma wuxuuna ka kireystay Dad aan Nadiif aheyn oo lagu sheegay inay Musuqa Maafiyada Talyaaniga ku lug leeyhiin.
C/Xaakim Cali Yaasiin wuxuu kamid ahaa Horintii uu Kol. C/llahi Yusuf u Magacaabay Safiirada, wuxuuna ku fariistay Kursiga Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Liibiya kadinah Sharif Sheikh Axmed ayaa wuxuu u badalay Safaarada Tanzaaniya oo uu hada Safiir ka yahay.
Tahriibayaalka Soomaaliyeed waxey C/Xaakim Cali Yaasiin ku tilmaamaan ma naxe aan Muujin Damiir Soomaalinimo. Wuxuu ku naaxay oo uu ka Ganacsadaa Tahriibayaalka Soomaaliyeed, wuxuuna iibsadaa kuwa xiran si Xabsiga looga soo daayo. Safaarada dhexdeeda ayuu Xawilaad ka dhex furtay, wuxaana lagu eedeeyay inuu Iibsado Baasaboorada Gaduudan ee loo yaqaano Diplomaciga.
C/Xaakim waa Nin Caan ah oo si fiican ay u hadal hayaan Tahriibayaalka Soomaaliyeed waxeyna hada kahor kusoo oogeen Dacwo ka dhan ah oo ay Afartan Tahriibyaal u gudbiyeen UHCR-ka, dacwadiina waa socotaa.
Kuwaan yesan soo noqon...
5. Godane, Shangole, Roobow, Xassan Dahir & Cali Dheere
Xasan Daahir Asalkiisu wuxuu ahaa Korneel Ciidamada Asluubta, , wallow Waqtiyadii dambe uu shaati diimeed gashaday, Dadka yaqaana waxey ku sheegaan in uu yahay Nin fudud oo aan tala qaadan taladiisana aysan kaafin. Tala xumada iyo kaligi talisnimada ayaa Xasan Daahir waxa u horseeday in kooxdiisii maskax ahaan la burburiyo kadibna awood ahaan lala wareego.
Kooxda Godane waxey u aragtay Xasan Daahir Nin Camiil ah oo dhinicii la rabo loo roogi karo, maantay wuxuu Maxbuus ku yahay Magaalada Baraawe wuxuuna ku jiraa Qol 4x4 Mitir ah oo lagu ilaaliyo.
Rooboow waxaa la sheegaa in uu ku dhuumaaleysto Inta u dhaxeysa Xudur iyo Waajid waxaana la sheegay inuu habeenba Meel Seexdo. Sidoo kale Dad Beeraley ah ayaa waxey sheegeen inuu Cali Dheere ku suganyahay Inta u dhaxeysa Afgooye iyo Balcad, asagoo Garka xiirtay,
Waxaan wali la sheegin Meel ay Jaan iyo Cirib dhigeen Axmed Godane iyo Shangole iyo Ciidamadoodi oo aan Hal Baabuur lagana qaban lagana gubin.
Godane, Shangole, Roobow, Xassan Dahir & Cali Dheere waxaa la sheegaa inay Burbur iyo Barakicin weyn u geesteen Koofurta Soomaaliya, waxey Soomaalidu aaminsantahay inay Sabab u yihiin Joogitaanka Ciidamada NATO ee Xeebta Soomaaliya. Sidaasnah waxey ku Muteysteen inay Qaadaan Bilada Hormuudka Xadgubuyada Sanadkii Sadexaad.
6. Ciidamda Dowlada
Waxaa loo yaqaanaa Ciidamadaan Maryacalas iyo Calalo-uus kuwaasoo muuijnaya naceyb baahsan, waa iska caado in qof walba oo shacab ah marka uu arko askari qori wato inuu aad uga naxo, sabab la xiriirta baarasho ama Dil. Dadweynuhu waxey Caado ka dhigteen inay Xeroodaan Maqribkii waxa aan ka aheyn inta dagan Dariiqa Maka Al-Mukarama.
Ciidamadaan Xadgudubka ku caan baxay qaar kamid ah waxey wali ku xiranyihiin oo ay xiriir la leeyihiin Rag kamid ah Hogaankii sare ee TFG-dii oo Gabalkeedi dhacay. Waxeyna Shacabka Soomaaliyeed ka muteysteen Billada Hormiidada Xadgubka.
7. Burcad Badeeda
Burcad Badeedu waxey kamid tahay Warshadaha Lacagta farahabadan laga sameeyo, waxaa 1994 laga Aas-Aasay Bariga Soomaaliya oo hada loo yaqaano Maamulka Puntland. Waxaana Abaabulkaas sameeyay Rag kasoo qalanjabiyay Jaamacadaha Talyaaniga kuyaala iyo Rag lagu sheegay inay lug ku leeyihiin Maamulka Puntland oo Heshiis la galay Maafiyada Talyaaniga.
Heshiiska ayaa wuxuu lahaa Labo Barnaamij ama Labo Mashuurc: Mid waxey aheyd in Sunta Nuclearka lagu aaso Xeebta Soomaaliya, mida Labaadnah in la qafaasho Maraakiibta sida Sharci darada uga jilaabata Xeebta Soomaaliya. Waxaa la Abaabulay Qeyb Qubara'a ah oo Saldhig ka sameesatay Magaalada Dubai iyo Qeyb Qubara'a ah oo Boosaaso saldhig ka sameysatay.
Qolada Dubai waxey soo sheegtaa Markabka la qafaalayo Astaamihiisa, Qoloda Boosaasonah waxey abaabushaa Qaabkii uu Qafaalka u dhici lahaa. Mashruucyadaas waxaa laga sameeyay Malaayiin Dollar, waxeyse Soomaali guud ahaan usoo jiiday Sumcad Xumo iyo Heybadii Magaca Soomaaliga oo la mid noqday Soomaali = Burcadbadeed.
Qorshahaas Abaabulnaa 2000 wixii ka dambeeyay wuxuu isku badalay Jaantaa furan oo wixii Jirid Mooryaan ahaa ayaa Badda waxey la galeen Doonyo 7 Mitir ah oo Mooryaan ka buuxdo sidaas baa Maantay Xeebta Soomaaliya waxaa lagu magacaabaa Xeebta ugu qatarsan Caalamka aan ku noolnahay. Waxaana Dalka Soomaaliya lagala wareegay Hanaankii dhul xeebeedka Soomaaliyeed, waxaana Xeebta Soomaaliyeed hada ku sugan sida la xaqiijiyay Maraakiib waaweyn oo lagu qiyaaso 500 oo ka kala socda 84 Dowladood.
Jeraa'idka Caalamka oo marar badan wax ka soo Qoray ayaa waxey Muujiyeen in ay Qoyska C/raxmaan Faroole iyo Burcad Badeedu ay leeyihiin Xidid Hoose oo ay ka wada Biyo cabaan.
8. Teefishinada Soomaaliyeed
Telefishino Beeledyo oo ay Burcad Badeed maal galiso iyo kuwa kaleba ayaa waxaa loo furtay waayahaan dambe sidii Maqaayad oo kale.
Waxaa ku arkeysaa Yabaq xayeesiis ku sheeg ah iyo naado lacag aruursi ah, sida kuwa Qaldah Maanka Islaamaha Da'ada ah oo Daciifka ah kuna beerlaxowsada Aaqiro Sijaayad u gado. Turuufada "Aaqiro Sijaayad u gado" waxaa lagu aruursaday Lacag ka badan 20 Malyan oo Paound. Shaashado Beeleedka Magaca Telefishinka wata qaarkood Dadku waxey u arkaan in danaysi iyo nin jeclaysi ku Howlgalaan Habda kii waxyar u tuuranah Buunbuuniyaan.
Inyar ma ahanee ma gutaan xilka Qaranka iyo u codaynta danaha bulshada, waxayna u daneeyaan kuwa Qaranka dumiya oo gumaada. Waxey ku daneystaan Boqolaalka Dhalinyarada ah oo ay ku shaqeystaan mana ilaaliyaan habayaraatee Xuquuqda Shaqaalaha.
Waa Sanadkii Labaad oo uu Telefishinku kamid noqonayo inta lagu nashiray looxa ceebta. Aqrsitow u fiirso inta Aqoonta u leh Telefishin wuxuu yahay, Saxaafadi waxey tahay iyo Anshaxa iyo Heybada warbaahinta ay huwantahay oo ay Garab mareen.
Astakooyin baa waxey ka imaanayaan Xerada Dhadhaab iyo IFO waxaa la sheegay inuu Kufsigu Caado noqday, waxaa la sheegay in Gabdhaha yar yar oo aan wali Qaangaarka aheyn Landcoruser lagu qaato oo lasoo falfal xumeeyo, waxaa la sheegay in Caruur farabadan la La'a yahay waxaana la tuhunsanyahay in Dalalka Yurub iyo Amerika loo dhoofiyo lama yaqaan wax lagu sameeyo Caruurtaas waxaase la tuhunsanyahay in Parts loo isticmaalo.
Waxaa kaloo la tuhunsanyahay Maadaama Xerada wax aan Hey'add aheyn aysan soo gali karin in ay Arintaas Xog-ogaal u yihiin Hey'addaha ka howlgala Xerooyinka aan kor kusoo sheegnay. Waana Haboonaan laheyd hadii ay suurtagal tahay in wax laga weydiiyo...
10. Ganacsatayaasha - Dollarka iyo Daawooyinka
Taariikhda Soomaaliya markii la baaro ilaa bilowga waxaa ku xusan in Dalka Soomaaliya uu ahaa Dal Ganacansi waxaana imaan jiray Xeebaha Soomaaliya sida Zeylac, Hobyo, Muqdisho (Muqashasha), Marka, Baraawo… Maraakiib ay wataan Gacansato Shiinees ah iyo kuwa Faraaciinta Masar.
Ilbaxnimada Ganacsigaas wuxuu hakad ku yimid Qarnigii 17-aad dhamaadkiisi oo aheyd markii ay soo galeen Gumeysiga Yurub. Intaas waxaan uga gudbeynaa Taariikhdii fogeed oo aanan halkaan kusoo koobi karin ugana gudbneynaa wixii ka dambeeyay 1991-dii.
Waxaa Burburay Heshiisyadii Ganacsiga ee uu Bangigu dhexdhexaadin jiray, sidoo kale waxaa meesha ka baxay Khiimihii Lacagta Qalaad lagu kala Sarifan jiray. Waxaa Booskaas uu Bangigu ka baxay buxuuyay rag Gacansata ah oo Soomaaliya looga yaqaano "Maalin-ku-Taajiro" iyo "Xaaraan ku Naax" dabcan kuligood ma wada ahan oo Dad Xalaal ahna way ku jiraan, hase ahaatee Arintaas waxey keentay Sixir barar ku yimaada Maciishada Daruuriga.
Waxaa dhacda in Maalin Doollarka Dhulka la dhigo, Labo maalmood kabacdinah intey dib u gataan inay Samada geeyaan kadibnah hoos usoo ridaan oo ay Maalinta dambe kor u qaadaan sida dheesha Kubad habda dhinac loo tuurayo. Waxey ka Macaashaan Maaliintii ay gateen iyo Maalintii ay iska gadeen, waxaana suurtowda inay Maalin kaliyah soo gasho intuu heystay Laba jibaarkeed taas waa Dollarka iyo Sarifka.
Tusaalaha Daawooyinka: Waxaa Doon ama Dayuurad laga soo buuxsanayaa Daawo dhacday ama mid aan Nuxur wax tareed laheyn laakiin Magac Daawo wadata, wax Koontroolaya ma jiraan oo aan Illahey aheyn. Waxey la heshiinayaan Taqtar Daawada Qora, waxeyna ku gadayaan Qiimo Diyo u dhigma.
Waxaa la sheegay in Dad badan ay u Geeriyoodeen kadib markii ay Isticmaaleen Daawooyinkii Taqtarku soo Qoray qaar kalenah ay ku sumoobeen.
Ragga ka Gacansada Doollarka, Daawada iyo Qeybo kale oo Ganacsigu leeyahay oo aan qaabka Maafiyada waxba dhaamin Masaajidka ayaga ayaa kaaga horeeya… oo ilanka hadii aad iskaga hortimaadaan wey ku dardarayaan…
Hadaba Akhriste maxaad ku dari laheyd shaqsiyaadkan iyo kooxahan ay Shacabka Soomaaliyeed u aqoonsadeen Hormuudyada Xadgudubka Soomaaliya ee 2012, fadlan Aragtidaada noogu soo dir E-Mail (xariir@Keydmedia.net) ama Facebook.
Keydmedia Online - Editorial Team | Salma Abdikarim Ayuub - Ayuub A. Aden - Naciimo Warsame